इष्टर्न हाइड्रोपावरको शेयर खुला
scheduleबिहिवार श्रावण २ गते, २०७६
भोजपुर, ३ चैत । पिखुवा खेलामा निर्माण भइरहेको इष्टर्न हाइड्रोपावरको आजदेखि संस्थापक शेयर खुला गरिएको छ । हाइड्रोपावरको मुख्य रुपमा प्रभावित क्षेत्र पर्ने भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५, ६,७ र ९ तथा अन्य जिल्लाबासीका लागि शेयर खुला गरिएको इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेडले जनाएको छ ।
प्रभावित ४ वटा वडाका स्थानीयवासीले प्रतिकित्ता एक सय र प्रभावित क्षेत्रबाहेकका अन्यले प्रतिकित्ता १५० मा कम्तीमा ५० कित्ता र बढीमा १० हजार कित्तासम्म शेयर खरीद गर्न सक्ने कम्पनीका जनसम्पर्क अधिकृत दीपेन राईले जानकारी दिए । शेयर प्रभु बैंक भोजपुरमार्फत लिन सकिने जनाइएको छ । शेयर आजदेखि १५ दिनसम्म खरीद गर्न सकिने अधिकृत राईले जानकारी दिए ।
हाइड्रोपावरको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएकाले यही चैतभित्र सञ्चालन गरिने कम्पनीले पत्रकारसम्मलेनमार्फत जनाएको छ । यो जलविद्युत जिल्लाको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पाँच मेगावाट क्षमताको हो । जलविद्युत् आयोजना करीब रु एक अर्ब २० करोड लागतमा निर्माण भइरहेको छ । रासस
यी हुन् मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका संस्थाहरु
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्ज हुने
नेप्से आठ अङ्कले घट्यो, कसको अवस्था कस्तो ?
दुग्ध विकास नीति परिमार्जन गर्दैै सरकार, यस्तो छ गृहकार्य
‘व्यापार सहजीकरणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा’
शेयर बजारमा बिग मर्जरको प्रभाव, बुधबार दोहोरो अंकको सुधार
विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो: डलर, रियल र रिङ्गिटको दर कति ?
काठमाडौँ, २ साउन । बार्सिलोना फर्किने सपना देखेका स्टार खेलाडी नेयमार पिएसजीमा बस्न चाहँदैनन् । उनी पिएसजीमा खुसी नरहेको...